Sida loo badalo AVCHD Videos la gacan-jabis
Sida loo Beddelaan AVCHD Videos la gacan-jabis
Gacan-jabis waa software transcoder video in badasha video iyo luxay DVD laba qaabab caadi ah sida MP4 iyo MKV. Waxaad uma isticmaali karo gacan-jabis aad video haddii haddii qaab ah oo aan oo ay taageerayaan software this. AVCHD waa mid ka mid ah qaab ah in gacan-jabis taageertaa. Waxaad ka heli doontaa in files ugu taasoo ay taageereyso libavcodec iyo libavformat sida MOV, AVI ama MKV si fiican u la software shaqayn karo. Kasta oo qaab-Bluray sida iyada oo aan la ilaalin nuqul ma la gacan-jabis shaqeeyaan.
Qaabab aqbasho gacan-jabis yihiin kuwo aad u badan. Laakiin waxaad Ogaan in ay taageerto kaliya labo qaabab wax soo saarka kuwaas oo MKV iyo MP4. Taas macnaheedu waa in haddii aad rabto in aad si loogu badalo videos fiidiyo leh qaab AVCHD in MKV ama MP4 qaabab, waxaad isticmaali kartaa software gacan-jabis. Laakiin haddii aad rabto in aad si loogu badalo videos leh qaab AVCHD qaababka sida MOV ama AVI, aad leedahay si aad u isticmaasho kale software gacan-jabis sida Wondershare Video Converter Ultimate. In la soo koobay, gacan-jabis ayaa sifooyinka soo socda
Source Free iyo furan software
Beddelaan video ka ku dhawaad ​​qaab laakiin qaabab wax soo saarka jira laba kaliya
Taageerada multi-madal nidaamyada hawlgalka Ie Windows, Linux iyo Mac
Talaabada 1: Download software gacan-jabis oo ku xidh galay your computer si loogu badalo video AVCHD ah.
Talaabada 2: software gacan-jabis Launch. Waxaad awoodi doontaa inaad si ay u helaan suuqa kala dejinta ah taas oo ka caawisa in ay helaan faylka in aad rabto in aad soo dhoofsadaan. Dejinta files AVCHD in aad ku doonayso in ay badalo galay software this ka. Waxaad ku samayn kartaa adigoo dooranaya khiyaar ah ee loo dhoofiyo galay app Mac. Haddii aadan awoodin in aad aragto suuqa kala dejinteeda, u tag geeska bidix ee kore ee interface software iyo guji badhanka Source ah. Haddii kale, waxaad riixi kartaa batoonka caleenta ku yaalla qaybta Ahaado ah. Laakiin ku haay maanka in gacan-jabis u ogolaadaan isticmaalayaasha inay dajiyaan files oo iyaga loogu badalo mid mid. Waxaad isticmaali kartaa kale gacan-jabis ah haddii aad rabtid in aad duwan.
Talaabada 3: Dooro qaab wax soo saarka. Sida aan horeba u sheegay, taageero gacan-jabis qaab saarka kaliya labo kuwaas oo MKV iyo MP4. Haddii aad rabto in aad si loogu badalo aad fiidiyo AVCHD video files si ay u ciyaaro iPhone, aad guji horena toggle ku yaala dhinaca bidix ee kore ee interface gacan-jabis ah in ay doortaan iPhone horena doorasho. Laakiin haddii aad rabto in aad AVCHD fiidiyo video files inuu ciyaaro iPad, aad leedahay si aad gacanta qabsato goob wax soo saarka video ah. Haddii aad isticmaalayso software kale gacan-jabis kor ku xusan, waxaa la siiyaa fursado aad horena dheeraad ah oo ay ka mid yihiin in ee iPad.
Talaabada 4: ka dib xulashada qaab wax soo saarka (MKV ama MP4) bilaabi si loogu badalo files AVCHD aad la isticmaalayo software this. Waxaad samayn kartaa adigoo gujinaya ah 'Start badhanka' ku taalla geeska sare ee midigta ah gacan-jabis ugu weyn.
Alternative si gacan-jabis-Wondershare Video Converter Ultimate
Tani waa ka sii badan intii Converter video ah. Waa in software xaqiiqda la dhamaystiran video qalabeed. Waxaad isticmaali kartaa Wondershare Video Converter Ultimate inaad kala soo baxdo, edit, diinta, abaabulo, kor loogu qaado, qabashada iyo daawato videos in ka badan 150 qaabab. Wondershare Video Converter Ultimate Waa software ah ka sii horumarsan yahay gacan-jabis markii is barbar qaababka.
Tayadoodii u kombuyuutarrada gacanta
Taageerada Video Faalladaada
Taageerada Saarashada Online Videos
Guba DVD Videos
Play Video dib markii diinta
Luqadaha Ingiriisi, Isbaanish, Jarmal, Faransiis, Chinese Trad, Talyaaniga, Japan, Portuguese Taageerada Luqad English
Sida laga soo xigtay falanqaynta ee kor ku xusan, Wondershare Video Converter Ultimate ku guuleystay in ka badan gacan-jabis. Waxaad Ogaan in software tani waa ka sii badan intii Converter video marka aad is barbar qaababka ay in in ka mid ah gacan-jabis ah. Waxaa deg deg ah in la isticmaalo software la dhamaystiran video qalabeed duwan gacan-jabis. Waxaad isticmaali kartaa Wondershare Video Converter Ultimate in uu sameeyo shaqooyinka aan xad lahayn duwan gacan-jabis in inta badan loogu badalo oo waad dooxi doontaa videos. Iyadoo Wondershare Video Converter Ultimate, waxaad kala soo bixi kartaa, edit, diinta, abaabulo, kor loogu qaado, qabashada iyo daawato videos in ka badan 150 qaabab. Laakiin iyadoo gacan-jabis, waxaa jira labo kaliya qaabab wax soo saarka oo ay taageerayaan. Guud ahaan, Wondershare Video Converter Ultimate waa software sare dheeraad ah leh si fudud oo deg deg ah si ay u isticmaalaan gacan-jabis ka badan.
Sida loo Play iyo Beddelaan Files AVCHD la VLC
Top 5 AVCHD Video ayeey Software
Sida loo Beddelaan AVCHD in H.264 Files
Sidee inuu ka soo kabsado Videos ka Sony Xperia Z
TP Video Editor: Sida loo Edit TP Video
Sida loo Edit Videos in Windows Media Player
Sida loo Kordhi Volume faylasha Warbaahinta
> Resource > Video > Sida loo Beddelaan AVCHD Videos la gacan-jabis